Wararka - Dhaqdhaqaaqa jilibka ee la isku hagaajin karo
Jilib jilibku waa nooc ka mid ah qalabka ilaalinta ee dhaqan celinta. Si looga hortago bukaanada qalliinka ka dib qalliinka jilibka in la dul dhigo balastar culus oo hawadu qabato, ajilbahawaxaa si gaar ah loogu talagalay bukaannada qalliinka wadajirka ah ee jilibka ka dib. Xagasha jilibka la isku hagaajin karo. Qalabka jilibka ee jilibka ayaa ka mid ah qaybta qalabka ilaalinta dhaqan celinta.
Ku jilbaha isku laalaada wuxuu ka samaysan yahay dhar caadi ah, nidaamka hagaajinta wuxuu ka sameysan yahay aluminium miisaan fudud, oo muujinaya iftiin iyo qalab fudud oo ku habboon qalabka difaaca caafimaadka.
Kala duwanaanta dalabka ee isku dhejinta jilibka
1. Baxnaaninta ka dib qalitaanka jilibka.
2. Dib u soo celinta adeegsiga dhaawaca ka dib ama ka dib qalliinka seedaha dhinacyada iyo dhinacyada dambe iyo isgoysyada hore iyo kuwa dambe.
3. Hagaajinta ama xaddidaadda dhaqdhaqaaqa qalliinka meniscus ka dib
4. Jilibka oo jilciyo, qalliinka arthritis-ka ama qalitaanka jabka.
5. Daaweynta muxaafidka ah ee jilibka iyo dhaawacyada unugyada jilicsan, iyo kahortagga qandaraasyada.
6. Hagaaji adeegsiga ka dib markii aad goor hore malaaska ka saartay.
7. Daaweynta muxaafidka ah ee waxtarka u leh dhaawaca isugeynta.
8. Jabka xasilloon.
9. Furitaanka laf-dhabarka oo daran ama murugsan.
Bukaannada ka soo kabanaya qalliinka jilibka, muddada soo kabashada ayaa aad muhiim u ah.
1. Waqti ayey qaadataa si looga bogsado qalliinka ligament ka dib, iyo 6 ilaa 12 toddobaad kadib qalitaanka waa isku xirka ugu daciifka ah.
2. Qalabka difaaca ee shaqeynaya wuxuu bukaanka u sheegayaa inay dhammaystireen qalliinka jir ahaan iyo cilmi-nafsi ahaan, laakiin waxay u baahan yihiin waqti kala-guur ah si ay ugu noqdaan xaalad caadi ah oo jir ahaaneed, sidoo kale waa daaweyn jireed oo aad u fiican oo lagu soo kabanayo waxqabadka wadajirka ah.
3. Qalabka difaaca ayaa sii nafsiyan ahaan uga dhaadhicin kara inay weli si fiican u ilaalin doonaan ka bixida isbitaalka ka dib